Self Employed Health Insurances, Author at Shwe Yaung Lan
Author: Self Employed Health Insurances
ထီဖှငျ့ပှဲနမှေ့ာ Online ပျေါမှာနာမညျကွီးနတေဲ့ လူရှငျတျောခကျြကွီး ရဲ့ “လှဲလှဲလေးပဲကောငျးပါတယျ”Video ဖိုငျ
By Self Employed Health InsurancesPosted on October 1, 2019 October 1, 2019
Unicode Version ( Video ဖိုငျကို အောကျဆုံးမှာတှဲပွီး တငျပေးထားပါတယျ )7Plus အငွိမျ့အဖှဲ့ နဲ့ အတူ ပရိသတျတှကေို ရယျမောပြျောရှငျအောငျ တငျဆကျပေးနတေဲ့ လူရှငျတျောခကျြကွီးဟာ ဟာသဉာဏျလညျး ကောငျးလှသလို သူ့ရဲ့ […]
ရှသေားစဈစဈ သိနျးတဈထောငျကြျောဖိုးရှိတဲ့ ထိုငျမသိမျးနဲ့ Show လြှောကျခဲ့တဲ့ Model ရှစေငျ
By Self Employed Health InsurancesPosted on October 1, 2019
Unicode Version မျောဒယျလျလောကမှာ ရှစေငျဆိုတာ နရောတဈခုရယူထားနိုငျသူပါ… ပုရိသတို့ကို ဆှဲဆောငျထားနိုငျတဲ့ အမိုကျစား Body လေး ကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး အပွဈကငျးစငျတဲ့ Innocent Face လေးကွောငျ့လညျး မိနျးကလေးပရိသတျတှကေပါ အားပေးခဈြခငျကွတဲ့ ရှစေငျဟာ Mingalar […]
ယနထေီ့ဖှငျ့ပှဲမှာ မိတျထီလာမွို့မှပဲ သိနျး ၂၀၀၀ ဆုကိုဆှတျခူးခဲ့(ထီပေါကျစဉျတိုကျရနျပါသညျ)
Unicode Version ပရိသတျကွီးရေ ဒီနမှေ့ာတော့ ကပျြ ၁၀၀၀ တနျအောငျဘာလထေီဖှငျ့ပှဲကွီး ပွုလုပျပွီးခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ…. ထီဆုမဲမြားစှာထဲက အမွငျ့ဆုံး ဖွဈတဲ့ ကပျြ သိနျး ၁ သောငျးခှဲဆုကွီးကိုတော့ ထီလကျမှတျ ဓ ၃၄၁၆၁၁ နဲ့ […]
ခနျြပီယံဆုကာကှယျပှဲကို အောကျတိုဘာလလယျမှာ စတငျယှဉျပွိုငျသှားမယျ့သကျထားသူဇာ
ပရိတျသတျကွီးရေ ဒီတဈခါတငျဆကျမယျ့ သတငျးလေးကတော့ မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ ကွကျတောငျမယျ သကျထားသူဇာဟာ အောကျတိုဘာလလယျလောကျမှာ သူမရဲ့ ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျရမယျ့ ပှဲလေးရှိနပေါတယျ။ သကျထားသူဇာဟာ ၂၀၂၀ အိုလံပဈ ပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျနိုငျဖို့အတှကျ အပွငျးအထနျ ကွိုးစားပွီး အမှတျစုဆောငျးနသေူလေး တဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ […]
အခါပေးဆရာပွောတဲ့အတိုငျးထီစပျတူထိုးရာက သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီး ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တဲ့ ကားဝပျရှော့ဆရာကိုစိုးနိုငျ
အောငျဘာလထေီ (၈)ကွိမျမွောကျ ကပျြ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကို မိတ်ထီလာမွို့က ဆှတျခူးခဲ့တယျလို့ ကနဦး သိရပါတယျ။ ထီနံပါတျဟာ ဓ-၃၄၁၆၁၁ ဖွဈပွီး မိတ်ထီလာမွို့ အာငျဇယေရြပျကှကျမှာ နထေိုငျတဲ့ ကိုစိုးနိုငျ က ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မိတ်ထီလာမှာ ကားဝပျရှော့ ဆိုငဖှငျ့လှဈထားတဲ့ […]
ဒီလ ၈ ကွိမျမွောကျထီဖှငျ့ပှဲမှ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုရှငျ ထှကျပျေါလာပါပွီ
Unicode Version ပရိသတျကွီးရေ ကပျြ ၁၀၀၀ တနျ အောငျဘာလထေီဖှငျ့လှဈခဲ့တာ ခု အောကျတိုဘာလမှာ ဆိုရငျ ၈ ကွိမျမွောကျ ဖွဈသှားပါပွီ… ဆုကွေးတှကေိုလညျး တိုးမွှငျ့ပေးထားရာမှာ အမွငျ့ဆုံးဆုက ကပျြ သိနျး ၁၅၀၀၀ ပဲဖွဈပါတယျ…. […]
ကားမောင်းနေရင်း live လွှင့်ရာမှ ကားမှောက်တဲ့ပုံပါ live ထဲပါသွားသူ
By Self Employed Health InsurancesPosted on September 27, 2019
အခုလို Mobile ဖုန်း​တွေကို လူတိုင်းနီးပါးကိုင်​​နိုင်​​နေပြီး အင်​တာနက်​​ကို ​နေရာ​တော်​​တော်​များများမှာသုံးနိုင်​​နေတဲ့ကာလကြီးမှာ ကား​မောင်းရင်း ဖုန်းသုံးတဲ့သူ​တွေ ခပ်​များများရယ်​ပါ။ ကား​မောင်းရင်း video call​ပြောတာ​တွေ ကားမောင်းရင်း Live လွှင့်တာ​တွေဟာ တကယ်​​တော့ အန္တရာယ်​သိပ်​များတဲ့ ကိစ္စတစ်​ခုပါပဲ။ ကားမောင်းနေရင်း Live […]
online ပေါ်မှာချစ်ကြိုက်ကြပြီး ကလေးနှစ်ယောက်အမေချစ်သူကို လူထွက်သွားတွေ့တဲ့ ဦးဇင်းရဲ့အဖြစ်
၂၁ရာစု​ခေတ်​ကြီးမှာ နည်းပညာတိုးတက်​လာတာနဲ့အမျှ ဆိုရှယ်​မီဒီယာကို အသုံးပြုမှုနှုန်းကလည်း အရမ်းကိုမြင့်​တက်​​နေတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ လူတိုင်းလိုလို ကိုယ်​​ရေးရာဇဝင်​အတု​တွေဖန်​တီးပြီး အအိုကအပျိုလို ဆက်​သွယ်​နိုင်​တဲ့ လူမှုကွန်​ယက်​စာမျက်​နှာ​တွေရဲ့​နောက်​ကွယ်​မှာ​တော့ အစစ်​အမှန်​ဆိုတာ ခပ်​ရှားရှားရယ်​လို့​ပြောရမလိုပါပဲ။ အွန်​လိုင်းမှာ ​တွေ့ဆုံကြပြီး အပြင်​မှာ ဖူးစာဆုံသွားကြသူ​တွေရှိသလို အတုအ​ယောင်​​တွေကြား အလိမ်​အခံလိုက်​ရတဲ့သူ​တွေလည်း ဒုနဲ့​ဒေးပါပဲ။ ဒီဗွီဒီယို​လေးထဲမှာ​တွေ့ရတဲ့ […]
အရင်​ဘိုးဘွား​တွေလက်​ထက်​တုန်းက​တော့ ညီအကို​မောင်​နှမ အများကြီးနဲ့ သိုက်​သိုက်​ဝန်းဝန်း​နေကြတဲ့မိသားစု​တွေ များကြ​ပေမယ့်​ ယ​နေ့​ခေတ်​မှာ​တော့ က​လေးတစ်​​ယောက်​ရဲ့စရိတ်​မ​သေးလှဘူးဆိုတဲ့အ​ကြောင်းပြချက်​နဲ့ က​လေးအများကြီး​မွေးဖွားတဲ့မိခင်​ ရှားပါးလာခဲ့ပါပြီ။ ​ဒေါ်ခင်​သူဇာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်​ဦးက​တော့ အသက်​၄၅နှစ်​အရွယ်​မှာ က​လေး ၂၆​ယောင်​ ဆက်​တိုက်​​မွေးဖွားခဲ့သူပါ။ ခင်​ပွန်းဖြစ်​သူ အသက်​၂၅နှစ်​ သူမအသက်​ ၁၈နှစ်​မှာ အ​ကြောင်းပါကာ […]
လူပေါင်း ၂ သန်းကျော်ရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ထူးခြားသွေးပိုင်ရှင်
James Harrisonဆိုတဲ့လူတစ်​ဦးဟာ ​ရွှေ​ရောင်​လက်​​မောင်းပိုင်​ရှင်​လို့ တင်​စား​ခေါ်​ဝေါ်ခြင်းခံရသူပါ။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့​သွေးဟာ ​မြောက်​မြားလှစွာ​သော လူ​တွေရဲ့အသက်​ကို ကယ်​တင်​နိုင်​တာ​ကြောင့်​ပါ။ သူအသက်​၁၄နှစ်​မှာ ခွဲစိတ်​မှုတစ်​ခုပြုလုပ်​ခဲ့ရပြီး ​သွေးသွင်းခဲ့ရလို့ ပြန်​​လည်​​ကောင်းမွန်​ခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​သူဟာ အသက်​၁၈နှစ်​ကစပြီး ​သွေးလှူဒါန်းခဲ့တယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ ဆရာဝန်​​တွေဟာ သူ့ရဲ့​သွေးထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ […]